तीन दिनमा दुई जनाबाट बलात्कृत, बलात्कारी धरौटीमा रिहा |
तीन दिनमा दुई जनाबाट बलात्कृत, बलात्कारी धरौटीमा रिहा
प्रकाशित मिति :2018-06-07 16:37:55
ललितपुर । मेरो २०७० सालमा विहे भयो । श्रीमान, घरपरिवार सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो । मिलेको घरपरिवार थियो । ससुराका ३ भाइ सबै अलग हुँदा भएको जग्गा सबैको भागमा लगाउनुपर्‍यो । मेरो ससुराको भागमा सानो घर र अलकति जग्गा मात्र ।
घर गुजारा गर्न समस्या भएपछि श्रीमान रोजगारका लागि विदेश गए । सासू ससुरा, जेठाजु सबै अलग बसे । मलाई बस्नलाई घर थिएन ।
बस्नलाई घर नहुँदा मेरो जेठा ससुराले मलाई आफ्नो घर नजिकैको सानो छाप्रोमा बस्न भने । अरुको घरमा बस्न भन्दा आफ्नै ससुराले दिएको छाप्रोमा बस्न मलाई सजिलो भयो । छोरीलाई काखमा च्याप्दै त्यही छाप्रोमा दिन गुजार्न थाले ।
दिनभर अरु काम केही नहुँदा टिनको छाप्रोको बाहिर अर्को टिनको पाता जोड्दै खुद्रा पसल शुरु गरे । पसलबाट आएको आम्दानीले साँझ बिहान आमाछोरीलाई खान पुग्थ्यो ।
फागुन २३ गते राति ९ बजे म सुत्नै लागेकी थिए । जेठा ससुरा आएर चुरोट माग्न थाले । ससुरा जहिले पनि चुरोट किन्न आउँथे । अरु सामान पनि लिएर जाने भएकाले मैले उठेर पसल खोले ।
छोरीलाई भित्र कोठामा सुताएर बाहिर चुरोट दिँदै गर्दा ससुराले मेरो मुख च्यापेर धकेले । अनि जबरजस्ती बलात्कार गरे । मैले चिच्याउन समेत पाइन । तर समाजबाट बदनाम हुने डरले मैले कसैलाई भन्न सकिन । बुहारीमाथि ससुराले यस्तो हर्कत गर्लान् भन्ने सोचकी समेत थिइन ।
त्यो दिनबाट म भित्रभित्रै गल्दै गए । त्यसको तीन दिनपछि फागुन २५ गते श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाएका थिए । त्यही पैसा झिक्न गाउँ नजिकै रहेको बजारमा गए ।
श्रीमानले पठाएको पैसा झिकिसकेपछि भोक लागेर खाजा खान त्यहीँको एउटा होटलमा गए । सोहि ठाउँको नवराज राईलाई म पहिलेदेखि चिन्थे । उनी पनि खाजा खाँदै थिए । राम्रो चिनजान थिएन । तर पनि भेट हुँदा बोलचाल हुन्थ्यो ।
खाजा खादै गर्दा राईले काम छ भन्दै होटेलको अर्को कोठामा बोलाए । के काम भन्दै म पनि गए । कोठाभित्र पस्ने बित्तीकै उसले मलाई जबरजस्ती गर्‍याे।
यो पटक पनि मैले कसैलाई भन्न सकिन । आफ्नै बदनाम हुन्छ भन्ने डर लाग्यो । तीन दिनको अवधिमा दुई जनाबाट भएको बलात्कारको कुरालाई मलाई मानसिक तनाव हुन थाल्यो । म आफू बिरामी भए । टाउको बेस्सरी दुख्यो ।
काम गर्ने जाँगर नै चलेन । त्यसपछि मेरो महिनावारी रोकियो । अस्पताल गएर टाउको दुखाई र पेट दुखाइको औषधी ल्याएर खाए । पछिल्लो दिन धेरै रगत बग्यो । उठ्नै सकिन । २ दिनसम्म म बिरामी भएपछि कान्छी सासू र ससुराले बोकेर ओखलढुंगामा रहेको मिसन अस्पताल पु¥याए ।
म आफैँ हिँडेर जान सक्ने अवस्थामा थिइन् । अस्पताल लगेर जाँच गर्दा डाक्टरले भर्खरै गर्भपतन गर्नुभएको रहेछ । त्यसैले धेरै रगत गएको हो भने । मलाई बोकेर अस्पतालसम्म पुर्‍याउने सासू ससुराकै अगाडि डाक्टरले यस्तो भनेपछि मैले उनीहरूलाई कुनै जवाफ नै दिन सकिन ।
सबैले मुखामुख गर्न थाले । एक कान, दुई कान हुँदै गाउँभरि हल्ला फैलियो । श्रीमान विदेश, घरमा अर्कैको पेट बोक्ने भन्दै सबैले प्रश्न गर्न थाले ।
मैले कसरी भनु आफ्नै ससुरा र गाउँकै फलानोले जबरजस्ती गर्‍यो भनेर । बदनाम हुन्छ भन्दै लुकाएर बसेकी मैले सबैले थाहा पाएपछि आफ्नै जेठा ससुरा र राईले आफूमाथि जबरजस्ती गरेको कुरा सबैलाई भने ।
उल्टै गाउँलेले मलाई नै दोषी ठान्न थाले । गाउँमा अनेक कुरा काट्न थाले । घरबाट सासू ससुरा जेठानी सबैले घरमा बस्न दिएनन् । घरबाटै निकाला गरेपछि समाजको के कुरा गर्नु, गाउँबाटै निकालिए म ।
त्यसपछि ओखलढुंगामा रहेको सुरक्षित आवास गृहमा गए । सुरक्षित आवास गृहको सहयोगमा गएको वैशाख १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे । त्यसको पछिल्लो दिन ११ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगामा मुद्दा दर्ता गराए ।
मुद्दा दर्ता गरेको केही समयपछि म काठमाडौं आइपुगे । म अहिले काठमाडौंकै एक सुरक्षित आवास बसिरहेकी छु । ३ बर्षकी छोरी बोकेर कता जानु ? के गर्नु ? मेरो लागि न्याय कहाँ छ ? श्रीमानले पनि फोन गरेर उल्टै मलाई नै गाली गर्छन् ।
बलात्कारी धरौटी रिहा
मेरो उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरीले जबरजस्ती गरेको आरोपमा दुवै जनालाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूलाई प्रहरीले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले गएको आइतबार दुवै जनालाई धरौटीमा छोडेको छ ।
महिला खबरले जिल्ला अदालतमा बुझ्दा जेठा ससुरा लक्ष्मीप्रसाद दाहाललाई ५० हजार र अर्को नवराज राईलाई ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको अदातलका श्रेष्तेदार तिर्थराज भट्टराईले बताए । भट्टराईले जबरजस्ती करणी गरेको कुनै प्रमाण नहुँदा धरौटीमा छोडिएको बताए ।